jealous နှင့် envy ဟူသည့်စကားနှစ်လုံး - Myanmar Network
jealous နှင့် envy ဟူသည့်စကားနှစ်လုံး
Posted by zar ni (My Way!) on August 12, 2014 at 12:33 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင်တစ်ယောက်ယောက်အပေါ်သ၀န်တို၊ မနာလိုဖြစ်ဖူးပါသလား။ သေချာတာပေါ့။ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့စိတ်၊ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာဒွန်တွဲနေမှာပါ။ jealous သည် မနာလိုသော၊ အဘိဇ္ဈာပွားသော၊ သ၀န်တိုသော ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက် အောင်မြင်သွားသည့်အခါ မကျေမနပ်ခံစားရသည့်၊ မပျော်ရွှင်သည့်ခံစားချက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာတစ်ခု သူတပါးရယူသွားမှာစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သည်။
ကောင်လေး၊ ကောင်မလေးတွေ မိမိချစ်သူက အခြားသူတစ်ယောက်နှင့်ရယ်မောနေသည့်အခါ ၀န်တိုစိတ်ကလေးများ တဖွားဖွားပေါ်တတ်ကြမဟုတ်လား။
အသံထွက်အနေနှင့် /'dʒel.əs/ ဟုထွက်သည်။"He grew jealous of her success" ။ လူသားတိုင်း မနာလိုတတ်ပါသည်။ Babies as young as five months old can be jealous. ငါးလသားကလေးတွေပင် မနာလိုစိတ်ဖြစ်တတ်ပါသည်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အစိမ်းရောင်အား မနာလိုဝန်တိုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ Green is the colour of jealousy and envy. ထို့ကြောင့် မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကြီးသူကို green-eyed monster ဟုခေါ်ကြသည်။ မိမိလိုချင်တာတစ်ခု တစ်ယောက်ယောက်(အထူးသဖြင့်မိမိနှင့်တန်းညှိဖက်) မှာရှိနေလျှင် green with envy မနာလို မရှုဆိတ်ဖြစ်လို့ မျက်နှာကြီးပုပ်သိုးနေပါသတဲ့။
Ben's heading off to Spain for the week and I'm green with envy.
ဘန် ကဒီတစ်ပတ်စပိန်သွားမှာမလို့ ငါတော့မနာလိုလိုက်တာနော်။
အောက်မှာ လန်ဒန်မြို့သားတွေသူတို့ရဲ့ ၀န်တိုစိတ်ဖြစ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်ပြောပြတာ လေ့လာကြည့်ပါ။
"I've just moved intoaflat with my girlfriend and we've planted tomato plants and herbs outside on the balcony. And this past weekend, we visitedafriend in the countryside and they haveabig garden and when I saw that garden and all the things they've got planted there, I felt quite jealous, quite jealous of the amount of space that they’ve got."
"Yes this year my friend went travelling round the world, got redundancy."
So you were jealous of her chance.
" I was jealous of her chance to be paid to go and see the world. So that was probably my example."
"When I was just dating my husband, and we went toaparty and someone asked him to dance. And he did just to be friendly, and I was just madly jealous."
I was jealous of her chance = သူအခွင့်အရေးရတာကို မနာလိုဘူး။
herbs = ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်
balcony = လသာဆောင်
countryside = ကျေးလက်ဒေသ၊ တောပိုင်း။
got redundancy = အလုပ်တွင်လူပိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။
သူရာထူးတိုးခံရတယ်လည်းကြားရော သူမ အကြီးအကျယ်မနာလိုဖြစ်သွားတယ်။
ဘာမဟုတ်သည့်အသေးအဖွဲမနာလိုစိတ်များကြောင့် အသင်းသည် ဒီရာသီတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျ ဆင်းခဲ့သည်။
inafit of jealousy = သူများရတာကိုယ်မရ၍ဖြစ်သည့်မနာလိုစိတ်
consumed by/eaten up with jealousy (very jealous)= အဘိဇ္ဈာကြီးစိုးသွားသည်
petty jealousies (= feelings of jealousy about unimportant things) = ဘာမဟုတ်သည့်အသေးအဖွဲလေးများကိုလိုက်မနာလိုဖြစ်ခြင်း
jealous ကို “တခုပ်တရ” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်လည်းသုံးတတ်သည်။ တစ်ခုခုကိုပြင်းပြစွာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့်အခါမျိုးဖြစ်သည်။
a jealously guarded secret တခုပ်တရကာကွယ်ထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်
We are jealous of our good name. ကျွန်တော်တို့၏အမည်ကောင်းအတွက်တခုပ်တရ ထိန်းသိမ်းပါသည်။
The exact location of the hotel where the royal couple is staying isajealously (= carefully) guarded secret. တော်ဝင်စုံတွဲတည်းခိုသည့်ဟိုတယ် နေရာအတိအကျအား အထူးဂရုစိုက်လျှို့ဝှက်ထားသည့်အရာ ဖြစ်သည်။
jealous နှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့်နောက်စကားလုံးတစ်လုံးမှာ envy ဖြစ်သည်။ envy သည် သူတပါးမှာရှိသည် ကို မိမိတွင်လည်းရှိချင်စိတ်ဖြစ်သည့် ဣဿာမစ္ဆရိယ မကောင်းသည့် စိတ်အနေနှင့်လည်းသုံးသည်။ အားကျသည့်စိတ်အနေနှင့် အကောင်းဖက်ကလည်းသုံးနိုင်သည်။ ကံထူးသည့်အချို့လူများတွင် the envy of somebody အများတကာ အားကျစရာ၊ မနာလိုဖြစ်ချင်စရာ၊ လူတိုင်းရချင်သည့် ဂုဏ်ရည်တစ်ခုခု ရှိနေတတ်သည်။
သူ့ရဲ့ တစ်ခါမှမဆုံဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်စွမ်းကို အားကျတယ်။
ကျွန်တော့်အောင်မြင်မှုအပေါ် သူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်ကို ဖုံးဖိမထားနိုင်ဘူး။
ရုံးမှာတော့ သူ့ဆံပင်က လူတိုင်းအားကျချင်စရာပဲ။
envy နှင့် jealous သည်အနှုတ်လက္ခဏာပြသည့်စကားလုံးများဖြစ်သော်လည်း သုံးသည့်လေသံ၊ မျက်နှာအမူအယာနှင့် အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီးအပြုသဘောဆောင်သည့်အဓိပ္ပါယ်လည်း သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအလုပ်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်လွှတ်ဖို့အရွေး ခံရသည်ကို “ငါတော့မနာလိုဘူးကွာ” ဟုပြုံးပြုံးလေးနှင့်ချီးကျူးနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တော့ သူတစ်ပါး၏အောင်မြင်မှုသည် အားကျအတုယူစရာဖြစ်ပါသည်။ သူအောင်မြင်တာကိုဝန်တိုငြူဆူနေ မည့်အစား မုဒိတာစိတ်ကလေးနှင့် ကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်သာ မှန်ကန်သည့် စိတ်ထားဖြစ်သည်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေမည့်အစား မိမိကိုယ်ကိုသာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် envy နှင့် jealous ဟူသည့်စကားလုံးနှစ်လုံးအား မိမိကမပြောရဘဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလူများထုတ်ပြောလာရမည်မှာ မလွဲဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
သငျတဈယောကျယောကျအပျေါသဝနျတို၊ မနာလိုဖွဈဖူးပါသလား။ သခြောတာပေါ့။ လူသားတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကောငျးတဲ့စိတျ၊ မကောငျးတဲ့စိတျတှဟောဒှနျတှဲနမှောပါ။ jealous သညျ မနာလိုသော၊ အဘိဇ်စြာပှားသော၊ သဝနျတိုသော ဟုအဓိပ်ပါယျဖှငျ့နိုငျသညျ။ ပွိုငျဖကျတဈယောကျ အောငျမွငျသှားသညျ့အခါ မကမြေနပျခံစားရသညျ့၊ မပြျောရှငျသညျ့ခံစားခကျြဖွဈသညျ။ နောကျတဈနညျးအားဖွငျ့ မိမိခဈြမွတျနိုးသညျ့အရာတဈခု သူတပါးရယူသှားမှာစိုးရိမျစိတျဖွဈသညျ။
ကောငျလေး၊ ကောငျမလေးတှေ မိမိခဈြသူက အခွားသူတဈယောကျနှငျ့ရယျမောနသေညျ့အခါ ၀နျတိုစိတျကလေးမြား တဖှားဖှားပျေါတတျကွမဟုတျလား။
အသံထှကျအနနှေငျ့ /'dʒel.əs/ ဟုထှကျသညျ။"He grew jealous of her success" ။ လူသားတိုငျး မနာလိုတတျပါသညျ။ Babies as young as five months old can be jealous. ငါးလသားကလေးတှပေငျ မနာလိုစိတျဖွဈတတျပါသညျတဲ့။ အင်ျဂလိပျဘာသာမှာ အစိမျးရောငျအား မနာလိုဝနျတိုခွငျးနှငျ့ဆကျစပျသုံးစှဲလရှေိ့သညျ။ Green is the colour of jealousy and envy. ထို့ကွောငျ့ မနာလိုဝနျတိုစိတျကွီးသူကို green-eyed monster ဟုချေါကွသညျ။ မိမိလိုခငျြတာတဈခု တဈယောကျယောကျ(အထူးသဖွငျ့မိမိနှငျ့တနျးညှိဖကျ) မှာရှိနလြှေငျ green with envy မနာလို မရှုဆိတျဖွဈလို့ မကျြနှာကွီးပုပျသိုးနပေါသတဲ့။
ဘနျ ကဒီတဈပတျစပိနျသှားမှာမလို့ ငါတော့မနာလိုလိုကျတာနျော။
အောကျမှာ လနျဒနျမွို့သားတှသေူတို့ရဲ့ ၀နျတိုစိတျဖွဈဖူးတဲ့အတှအေ့ကွုံလေးတှကေိုပွနျပွောပွတာ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
I was jealous of her chance = သူအခှငျ့အရေးရတာကို မနာလိုဘူး။
herbs = ဟငျးခပျအမှေးအကွိုငျ၊ ဆေးဘကျဝငျအပငျ
balcony = လသာဆောငျ
countryside = ကြေးလကျဒသေ၊ တောပိုငျး။
got redundancy = အလုပျတှငျလူပိုအဖွဈသတျမှတျခံရသညျ။
သူရာထူးတိုးခံရတယျလညျးကွားရော သူမ အကွီးအကယျြမနာလိုဖွဈသှားတယျ။
ဘာမဟုတျသညျ့အသေးအဖှဲမနာလိုစိတျမြားကွောငျ့ အသငျးသညျ ဒီရာသီတှငျစှမျးဆောငျရညျကြ ဆငျးခဲ့သညျ။
inafit of jealousy = သူမြားရတာကိုယျမရ၍ဖွဈသညျ့မနာလိုစိတျ
consumed by/eaten up with jealousy (very jealous)= အဘိဇ်စြာကွီးစိုးသှားသညျ
petty jealousies (= feelings of jealousy about unimportant things) = ဘာမဟုတျသညျ့အသေးအဖှဲလေးမြားကိုလိုကျမနာလိုဖွဈခွငျး
jealous ကို “တခုပျတရ” ဟူသညျ့အဓိပ်ပါယျနှငျ့လညျးသုံးတတျသညျ။ တဈခုခုကိုပွငျးပွစှာ ထိနျးသိမျးကာကှယျသညျ့အခါမြိုးဖွဈသညျ။
a jealously guarded secret တခုပျတရကာကှယျထားသညျ့လြှို့ဝှကျခကျြ
We are jealous of our good name. ကြှနျတျောတို့၏အမညျကောငျးအတှကျတခုပျတရ ထိနျးသိမျးပါသညျ။
The exact location of the hotel where the royal couple is staying isajealously (= carefully) guarded secret. တျောဝငျစုံတှဲတညျးခိုသညျ့ဟိုတယျ နရောအတိအကအြား အထူးဂရုစိုကျလြှို့ဝှကျထားသညျ့အရာ ဖွဈသညျ။
jealous နှငျ့ဆှမြေိုးတျောစပျသညျ့နောကျစကားလုံးတဈလုံးမှာ envy ဖွဈသညျ။ envy သညျ သူတပါးမှာရှိသညျ ကို မိမိတှငျလညျးရှိခငျြစိတျဖွဈသညျ့ ဣဿာမစ်ဆရိယ မကောငျးသညျ့ စိတျအနနှေငျ့လညျးသုံးသညျ။ အားကသြညျ့စိတျအနနှေငျ့ အကောငျးဖကျကလညျးသုံးနိုငျသညျ။ ကံထူးသညျ့အခြို့လူမြားတှငျ the envy of somebody အမြားတကာ အားကစြရာ၊ မနာလိုဖွဈခငျြစရာ၊ လူတိုငျးရခငျြသညျ့ ဂုဏျရညျတဈခုခု ရှိနတေတျသညျ။
သူ့ရဲ့ တဈခါမှမဆုံဖူးတဲ့လူတှနေဲ့ စကားပွောနိုငျစှမျးကို အားကတြယျ။
ကြှနျတေျာ့အောငျမွငျမှုအပျေါ သူ့ရဲ့မနာလိုစိတျကို ဖုံးဖိမထားနိုငျဘူး။
ရုံးမှာတော့ သူ့ဆံပငျက လူတိုငျးအားကခြငျြစရာပဲ။
envy နှငျ့ jealous သညျအနှုတျလက်ခဏာပွသညျ့စကားလုံးမြားဖွဈသျောလညျး သုံးသညျ့လသေံ၊ မကျြနှာအမူအယာနှငျ့ အခွအေနအေပျေါမူတညျပွီးအပွုသဘောဆောငျသညျ့အဓိပ်ပါယျလညျး သကျရောကျနိုငျပါသညျ။ သူငယျခငျြးတဈယောကျကိုအလုပျက နိုငျငံခွားပညာတျောသငျလှတျဖို့အရှေး ခံရသညျကို “ငါတော့မနာလိုဘူးကှာ” ဟုပွုံးပွုံးလေးနှငျ့ခြီးကြူးနိုငျပါသညျ။ အမှနျတကယျတော့ သူတဈပါး၏အောငျမွငျမှုသညျ အားကအြတုယူစရာဖွဈပါသညျ။ သူအောငျမွငျတာကိုဝနျတိုငွူဆူနေ မညျ့အစား မုဒိတာစိတျကလေးနှငျ့ ကိုယျလညျးသူ့လိုဖွဈအောငျကွိုးစားခွငျးသညျသာ မှနျကနျသညျ့ စိတျထားဖွဈသညျ။ သူနဲ့ကိုယျနဲ့နှိုငျးယှဉျနမေညျ့အစား မိမိကိုယျကိုသာ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ တိုးတကျအောငျကွိုးစားမညျဆိုလြှငျ envy နှငျ့ jealous ဟူသညျ့စကားလုံးနှဈလုံးအား မိမိကမပွောရဘဲ မိမိပတျဝနျးကငျြကလူမြားထုတျပွောလာရမညျမှာ မလှဲဟု ထငျမွငျမိပါသညျ။